China Springworks ga-agbakwunye 500,000 square ụkwụ nke hydroponic agricultural griin haus factory na suppliers | Aịxiang
Lisbon, Maine - Springworks, nke kasị ukwuu na nke mbụ gbaara ezi àmà organic anhydrous ugbo na New England, taa mara ọkwa atụmatụ ịgbakwunye 500,000 square ụkwụ nke griin haus ohere.
Mgbasawanye ahụ ga-aga n'ihu na-ejere ndị ahịa kacha ukwuu nke Maine Farms, Supermarket nri niile na Hannaford Supermarket, yana ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa na ụlọ ahịa ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ ndị a ga-enye Springworks na letus organic ọhụrụ agbaara agbapụta.
A ga-eji griin haus nke mbụ dị square 40,000 na Mee 2021, nke ga-eme ka ụlọ ọrụ na-emepụta Bibb, letus romaine, letus, mgbakwasa salad na ngwaahịa ndị ọzọ na puku paụnd tilapia okpukpu atọ. , Nke dị mkpa maka usoro uto nke Springworks nke aquaponics.
Onye nchoputa nke Springworks, Trevor Kenkel dị afọ 26, tọrọ ntọala ugbo na 2014 mgbe ọ dị afọ 19, ma ọ na-ekwu na ọtụtụ n'ime uto taa sitere na ụbara iwu sitere na nnukwu ụlọ ahịa na nzaghachi COVID-19.
Ọrịa ọjọọ a emebiela ọtụtụ ụlọ ahịa ihe nri na ndị na-azụ ahịa na-akwado ha. Mbupu igbu oge sitere n'aka ndị na-ebubata West Coast na-amanye ndị na-azụ ahịa nnukwu ụlọ ahịa ka ha chọọ isi obodo na mpaghara maka nri dị iche iche dị nchebe, na-edozi ahụ na nke na-adigide. Na Springworks, usoro gburugburu ebe obibi anyị dabere na-enye ọrụ n'akụkụ niile. Usoro a na-eji 90% obere mmiri karịa ụzọ ndị ọzọ, anaghị eji ọgwụ pesticides synthetic, ma na-enye anyị ohere ịmepụta akwụkwọ nri na-atọ ụtọ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ n'afọ niile. Na azụ. "Kenkel kwuru.
Mgbe ọrịa ọjọọ ahụ ghọrọ ewu ewu na 2020, Whole Foods zụtara Springworks iji chekwaa/echekwa ngwaahịa letus rụrụ arụ iji gboo nnukwu agụụ nke letus organic sitere na ndị na-azụ ahịa na Northeast. Ọtụtụ ụlọ ahịa nri enwetala enweghị ntụkwasị obi nke ndị na-eweta West Coast n'ihi igbu oge mbupu na ihe ndị ọzọ na-ebufe na oke oke.
Hannaford gbasaara nkesa letus Springworks sitere na New England gaa na ụlọ ahịa na mpaghara New York. Hannaford malitere ibupu letus Springworks na ụlọ ahịa ole na ole na Maine na 2017, mgbe agbụ ahụ na-achọ ihe nnọchi letus mpaghara na California, Arizona na Mexico.
N'ime afọ abụọ, ọrụ Springworks na ịdịmma kpaliri Hannaford ịgbasa nkesa ya n'ụlọ ahịa niile dị na Maine. Ọzọkwa, mgbe ọrịa na-efe efe na agụụ ndị ahịa rịrị elu, Hannaford gbakwunyere Springworks na ụlọ ahịa New York ya.
Mark Jewell, onye njikwa ụdị ngwaahịa ọrụ ugbo nke Hannaford, kwuru, sị: “Springworks ga-akpachara anya na-enyocha igbe ọ bụla mgbe anyị na-egbo mkpa inye letus anyị na inweta ihe mkpofu nri efu. Malite na usoro symbiosis nke azụ-akwukwo nri ya, anyị ga-etowanye akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ihe na-edozi ahụ nke ọhụrụ." Ihe ndị a, yana usoro nchekwa nchekwa nri ha dị mma, ịdị adị kwa afọ na ịdị nso na ebe nkesa anyị mere ka anyị họrọ Springworks Kama ịhọrọ ngwaahịa ndị na-eto eto na-ebufe na mba ahụ, ọ na-adị mfe."
Na mgbakwunye na ngwaahịa gụnyere Springworks 'Organic Baby Green Romaine letus, Hannaford ejikwa akara Springworks dochie letus akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ndụ ha dị ugbu a, nke nwere ike ịmepụta letus crispy kwesịrị ekwesị maka otu salad ma ọ bụ smoothie.
Kenkel na nwanne ya nwanyị Sierra Kenkel bụ osote onye isi ala kemgbe mmalite. Ọ nọ na-enyocha ma na-emepụta ụdị ọhụrụ nke ga-egbo mkpa azụmahịa nke ndị na-ere ahịa ma na-egbo mkpa ndụ na nri nke ndị na-azụ ahịa.
"Ndị ahịa na-eji ịdịmma na nghọta kpọrọ ihe na-arịọ ụlọ ahịa maka ngwaahịa organic sitere n'aka ndị na-emepụta nri mpaghara," Sierra kwuru, onye na-ahụ maka ire na ire ahịa Springworks.
"Site na mkpụrụ ruo ire ere, anyị na-arụsi ọrụ ike iji nye letus kachasị ọhụrụ na nke kachasị ụtọ nke na-echekwa dị ka nri dum na Hannaford na-atụ anya, na ihe ndị ahịa ha kwesịrị. Anyị na-atụ anya mkparịta ụka na nnukwu ụlọ ahịa ndị ọzọ na Northeast n'ihi na anyị The The ọhụrụ griin haus ga n'ihu welie anyị ike na-eto eto na-atọ ụtọ, na-edozi ahụ, na gbaara ọtọ letus organic-na kwa afọ ikike iji rụọ ọrụ ọpụrụiche green inine na herbs n'ọdịnihu. Na Maine."
Springworks tọrọ ntọala na 2014 site CEO Trevor Kenkel mgbe ọ bụ nanị 19 afọ. Ọ bụ onye na-akụ griin haoponic na Lisbon, Maine, na-amịpụta letus organic na tilapia akwadoro n'afọ niile. Azụ-akwụkwọ nri symbiosis bụ ụdị ọrụ ugbo na-akwalite mmekọrịta symbiotic dị n'etiti osisi na azụ. E jiri ya tụnyere ọrụ ugbo nke sitere na ala, usoro Springworks hydroponic na-eji 90-95% obere mmiri, na usoro ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nwere mkpụrụ kwa acre nke dị okpukpu 20 karịa nke ugbo ọdịnala.
Azụ na akwukwo nri symbiosis bụ usoro ọmụmụ nke azụ na osisi na-akwado uto ibe ha na usoro mechiri emechi. A na-agbanye mmiri nke bara ụba na-edozi ahụ nke a na-enweta site n'ịkụ azụ azụ n'ime akwa akwa iji zụọ ihe ọkụkụ. Osisi ndị a na-ehicha mmiri wee weghachi ya na azụ. N'adịghị ka sistemu ndị ọzọ (gụnyere hydroponics), ọ nweghị kemịkalụ achọrọ. N'agbanyeghị ọtụtụ uru nke hydroponics, e nwere nanị ole na ole azụmahịa greenhouses hydroponics na United States.
Oge nzipu: Eprel-20-2021